मिलन शासकको आदेश सुनेर एकाएक राज्य निराश भयो । राज्यका सबै नागरिक निराश भए । सैनिकहरूमा ऊर्जा हरायो । यस्तो देखेपछि तिमीलाई बढी माया लागेर आयो । सैनिकलाई गोप्य रूपले चर्चमा बोलाएर सुन्दर स्त्रीसँग विवाह गरिदिन थाल्यौँ । तिम्रो यो चाला क्लाउडियसले थाहा पाइहाले । त्यसपछि तिमीलाई जेल चलान गरियो १ फागुन, २०७७ 23 min read Share
भारुसभा लँगौटियाहरूको पारा देखेर अघिदेखि कुनामा बसेर दारु पिइरहेको दक्षिणढोके भारुस्थानीले मौका छोप्छ । बसेठाउँबाट जुरुक्क उठ्छ । अघि दारु पिउँदा बस्न अप्ठ्यारो भएर हङ्गेले फुकाली राखेको खानदानी तरबार जुरुक्क उचाल्छ । र, विलम्ब नगरी सबै आत्माको घाँटी छप्काउन थाल्छ । ऊ कुर्लंदै छ, ‘अब तिमीहरूको टेबुल मेरो कब्जामा भयो । तिमीहरूको कुर्सी मेरो कब्जामा भयो । तिमीहरूको दारु मेरो अधीनमा भयो । अब म खान्छु यी सितनहरू । म पिउँछु त्यो दारु’ २८ पुस, २०७७ 24 min read Share
जवानी, छोराछोरी बिर्सिएर परदेशमा यत्राे वर्ष ? हेमन्तको निर्मम प्रहारले ढक्क दक्षिण कोरियाको पश्चिम सिमाना भएर बग्ने एल्लो सी (yellow sea) जमेको छ, यतिबेला । र, हामी त्यही समुद्रको किनारमा ट्वाँक लगाउन बसेका छौँ १० पुस, २०७७ 24 min read Share
पैसा खुसी, सन्तुष्टि, परिवार, आफन्तहरूभन्दा पैसा ठूलो रहेनछ । पैसा र इज्जत मात्र कमाएर नपुग्दो रहेछ । ऊ सोचमग्न हुन्छ । कताकता उसलाई आफू संसारको सबैभन्दा डरछेरुवा लाग्छ । कायर लाग्छ । नालायक लाग्छ । गरिब लाग्छ । रित्तो लाग्छ । असलमा ऊ रित्तै पनि त छ । साँच्चै पैसाभन्दा अरु के नै छ र ऊसँग ? २६ मंसिर, २०७७ 24 min read Share
कोरोना महासंकटमा पनि नचेत्ने नेपाली सरकारले विकास निर्माणका विशेष केही योजनाहरू बनाउनुपर्ने हो । तर, दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली भनिएको ओली सरकारले कानमा तेल हालेर बसेकाे छ । सरकारले निकै महत्त्वाकाङ्क्षी भनेको निजगढ विमास्थल निर्माणको काम विदेशी ठेकेदारको हातमा नसुम्पिएर बेरोजगार आफ्नै नागरिकहरूलाई प्रयोग गर्न सक्थ्यो । दसाैँ वर्षदेखि भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई लकडाउनको अवधिमा मूर्त रूप दिन सक्थ्यो २५ असोज, २०७७ Share
(कथा) बेड नम्बर १११ खामभरी पत्रै पत्र छन् । प्रत्येक पत्रमा उसका र मेरा हैन, हैन उसले बिताएको एक्लोपनका क्यानभासहरू छन् । उसको बाबा काममा गएपछि घरमा एक्लै बस्नुपर्दाका बोझिला क्यानभासहरू छन् । बिरामी पर्दा ममताले सुमसुम्याइदिने आमाका हातहरू नहुँदाका छटपटीहरू छन् । मान्छे मान्छेबीचमा पैसाले बनाइदिएका बडेमानका पर्खालहरू छन् १६ असोज, २०७७ Share